Ogaden News Agency (ONA) – Badheedhahii kal-fadhigii 2aad shirweynihii 39aad ee xisbiga Raadikalka (NRPTT) arimaha Ogadenya
Badheedhahii kal-fadhigii 2aad shirweynihii 39aad ee xisbiga Raadikalka (NRPTT) arimaha Ogadenya
Shirweynahaa oo socday intii u dhexesay 8-11 Dec. 2011 oy ka qaybgaleen wafti uu hogaaminayo HAD ayaa waxaa lagu aqoonsaday qadiyadda Ogadenya, iyadoo la aqbalay codsigii wafdiga ONLF, halkaasoo uu ka soo baxay badheedhe (motion) loogu magacdaray (Special Motion Regarding the Ogaden) oo u qornaa sidan;
Xukuumadda Itobiya waxay ka wadaa Ogadenya xasuuq u dhigma dambi dagaal iyo mid aadminimo. Qaramada Midoobay iyo haya’adda xuquuqda uu dooda ee Human Rights Watch ayaa labadaba ay xaqiijiyeen dambiyadaa. Kal-fadhiga 2aad ee Shirweynihii 39aad ee xisbiga Nonviolent Radical Party Transnational and Transparty wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Itobiya inay joojiso dambiyadaa waana inay Itobiya;
1- Ka qaado cuna-qabataynta xagga dhaqaalaha iyo samafalka ee saaran Ogadenya.
2- Joojiso dilka sharcidarada ah, xadhiga iyo kufsiga ay u adeegsanayaan dagaalka.
3- Si dagdag ah u soo dayso dhamaan siyaasiyiinta u xidhan oy u ogolaadaan haya’daa Caalamiga ah ee Bisha iyo Laanqayrta Cas (ICRC) inay galaan Ogadenya si haya’daa u gudato waajibaadka saaran sida uu qeexayo xeerka Geneva.
4- Ay soo dayaan labada wariye ee Sweden ee dambiyada aan jirin ee argagixiska lagu eedeeyay una ogolaadaan saxaafadda caalamka inay inay si xor ah u dhex socdaan Ogadenya.
5- Joojiso Itobiya barakicinta qasab ah ee bulshada xoola dhaqatada ah lagu hayo si shirkadaha shidaalka loo siiyo iyo kuwa beeraha dhulkooda.
6- Inay Itobiya kala diraan maleesiyaadka dambiyada dagaal ku haya shacabkooda iyo shacabka Ogadenya.
7- Inay joojiyaan u adeegsiga mucaawanada caalamiga ah hab siyaasdeed iyo ciidan.
8- Inay ogolaato Itobiya wadahadal dhab ah inay la gasho ururka ONLF si dagaalka loo soo afjaro.
Shirweynaha xisbiga Raadikaalka (NRPTT) ayaa waxay ugu baaqayaan Qaramada Midoobay (QM), Midowga Afrika (MA), Midowga Yurub (MY), inay masuuliyad iska saaraan sidii loo joojin lahaa xasuuqa ka socda Ogadenya oo ah asal-tirtir (genocide). Si arintaa u hirgasho waa inay QM, MA, iyo MY u diraan Ogadenya guddi xaqiiqa raadin ah oo soo baadha xad-gudubka oo soo taaga sharciga kuwa masuulka ka ah.
Xisbiga Raadikaalka (NRTTP) wuxuu dhisi doonaa guddi dabagal ku sameeyo talooyinkaa la soo jeediyay.
F.G.Khudbadii HAD hoos ka fiiri adigoo ku dhufanaya magaca ah Abdi Maadi ama gee 47.